SPECIAL ECONOMIC ZONES - Business Centric Network (BCN)
May 16, 2018 San Thida
• Income tax exemption for the first seven years
• After seven years, 50% relief of current legal income tax rates for five years
• After 12 years, 50% relief of current legal income tax for profit that is reinvested within one year asareserve fund for the next five years
• Exemption from commercial tax or valued-added tax
• Exemptions from customs duties and other relevant taxation on imports of raw materials for production machinery instrument and necessary spare parts for production; construction material for building such as factories, warehouses and own offices and motor vehicles
• The exemptions of customs duties and other relevant taxation on the import of trading goods, consignment goods, motor vehicles and other materials which are essential forabusiness’s free-tax wholesale trading, export trading and services of provision and transportation.
• The option to apply for exemption on import tax or value-added tax for goods imported fromalocal or Promotion Zone toaFree Zone for the investor of Free Zone.
• Income tax exemption for the first five years
• After five years, 50% relief of current legal income tax rates for the second five years
• After 10 years, 50% relief of current legal income tax for profit that is reinvested within one year asareserve fund for the next five years.
• For the first five years, exemptions from customs duties and other relevant taxation on production machinery and replacement parts; and construction materials for building the business’s own facilities, such as factories, warehouses and offices.
• For the resources listed above, 50% relief of the custom duties and other taxation the next five years.
• The customs and other taxation shall be paid for the importation of raw materials and other goods for production.
• For the resources listed above for, the option to apply forarefund of customs duties and other taxation paid on importing them, if the goods they help produce are exported abroad or intoaFree Zone.
• Exemption of commercial tax and value added tax during the relevant relief period provided in the Special Economic Zone Law.
• In all other cases, businesses shall regularly pay the customs and other taxes upon importing raw materials and other goods for production
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည့် အထူးစီးပွားရေုးဇုန်ဥပဒေနှင့် အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သည့် နည်းဥပဒေကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤဥပဒေသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ (SEZs) ပေါ်ပေါက်လာစေရန် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
လတ်တလောတွင် SEZ သုံးခုကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူ၊ တင်္နဪာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ထားဎယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သီလဎါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တို့ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များတွင် စီမံအုပ်ချုပ်ကြီးကြပ်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီတို့ကို အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
SEZ များတွင် ကင်းလွတ်ဇုန်၊ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်နှင့်အခြားဇုန်များပါဎင်သည်။
အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ (၂ဝ၁၄) ၏ အခန်း (၁)၊ ပုဒ်မ (၃) တွင် ကင်းလွတ်ဇုန်ကို နိုင်ငံပြင်ပတွင် တည်ရှိသကဲ့သို့ယူဆရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြဌာန်း ထားသည်။ ကင်းလွတ်ဇုန်သည် အဓိကအားဖြင့် ပြည်ပ တင်ပို့သည့် ဈေးကွက်ကို အဓိကထားရန်ဖြစ်ပြီး ယင်းဇုန်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်မြေ၊ သယ်ယူထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ နေရာနှင့် လက်ကား ရောင်းဎယ်ဖောက်ကားသည့်နေရာများ ပါဎင်သည်။ SEZ အတွင်းမှ ကုန်စည်များနှင့် ဇုန်အတွင်း တင်သွင်းသော ကုန်စည်တို့အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခြား အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရရှိနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်သည် အဓိကအားဖြင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်နှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ အတွင်းရှိ ဈေးကွက်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။
အဆိုပါဇုန်၌ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ အိမ်ရာများ၊ ကုန်တိုက်များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများနှင့် အပန်းဖြေနားနေရာများ ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
• ပထမ (၇) နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
• (၇) နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် နောက်ထပ် (၅) နှစ်အတွက် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့်
• (၁၂)နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် နောက်ထပ်(၅)နှစ်အတွက် သီးသန့်ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း တွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ထို မြတ်စွန်းငွေအပေါ် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝင်ငွေခွန် နှုန်းထား၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့်
• ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် တန်ဖိုးဖြည့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
• ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ကုန်ကြမ်းများ၊ စက်ပစစည်း ကိရိယာများနှင့် အရန်ပစစည်းများ၊ စက်ရုံများ၊ သိုလှောင်ရုံများနှင့် ကိုယ်ပိုင် ရုံးခန်းများကဲ့သို့သော အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန် ဆောက်လုပ် ရေးပစစည်းများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်နှင် အခြားအခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်
• အခွန်လွတ်လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည်ပတင်ပို့သည့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် တင်သွင်းသည့် ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်မည့် ရောင်းကုန်များ၊ ရောင်းချပြီးမှငွေချေမည့်ကုန်စည်များ၊ ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် အခြားပစစည်းများကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများကင်းလွတ်ခွင့်
• ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်မှ ကင်းလွတ်ဇုန် သို့တင်သွင်းသည့် ကုန်ပစစည်းတင်သွင်းခွန်ကိုသော် လည်းကောင်းတန်ဖိုးဖြည့်အခွန်ကိုသော်လည်းကောင်း ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
• ပထမ (၅) နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
• (၅) နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် နောက်ထပ် (၅) နှစ်အတွက် တည်ဆဲဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့်
• (၁ဝ) နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် နောက်ထပ် (၅)နှစ်အတွက် သီးသန့် ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ် အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်းတွင် ပြန်လည် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလျှင် ထို မြတ်စွန်းငွေအပေါ် တည်ဆဲ ဥပဒေ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား ၏ ၅ဝ% သက်သာခွင့်
• ပထမ (၅) နှစ်၌ ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အသုံးပြုသည့် စက်ပစစည်းကိရိယာများနှင့် အရန် ပစစည်းများ၊ စက်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းတို့ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး ပစစည်း များကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းရာတွင် အကောက်ခွန် နှင့် အခြားအခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့်
• အထက်ဖော်ပြပါ အရင်းအမြစ်တို့အတွက် နောင် ၅ နှစ်အတွင်း အကောက်ခွန်နှင့် အခြား အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများမှ ၅ဝ% သက်သာခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
• ကုန်ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်း ပစစည်းများနှင့် အခြားကုန်စည်များ တင်သွင်းမှူ အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများကို ပေးဆောင်ရမည်
• အထက်ပါ တင်သွင်းသော ပစစည်းများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ချော ပစစည်း များကို ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ကင်းလွတ်ဇုန် အတွင်းသို့ဖြစ်စေ တင်ပို့ခြင်းဖြစ်လျှင် ယင်းပစစည်း များ တင်သွင်းသည့် အချိန်က ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
• အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေတွင် ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် တန်ဖိုးဖြည့်အခွန်တို့အား ၄င်းအခွန်များ သက်သာ ခွင့်ပေးသည့် ကာလအတွင်း ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထားသည်။
• အခြားအခြေအနေများတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များသည် အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်ထုတ် လုပ်မှု အတွက် တင်သွင်းသော ကုန်ကြမ်းနှင့် ကုန်ချော များအား စည်းကြပ်ထား သည့် အခွန်များကို ပုံမှန်အတိုင်းပေးဆောင်ရမည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှဈတှငျ ပွဌာနျးခဲ့သညျ့ အထူးစီးပှားရေုးဇုနျဥပဒနှေငျ့ အကောငျအထညျဖျောလုပျဆောငျသညျ့ နညျးဥပဒကေို ၂ဝ၁၅ ခုနှဈတှငျ ထုတျပွနျကွညောခဲ့သညျ။ ဤဥပဒသေညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အထူးစီးပှားရေးဇုနျမြား (SEZs) ပျေါပေါကျလာစရေနျ လမျးဖှငျ့ပေးခဲ့သညျ။
လတျတလောတှငျ SEZ သုံးခုကို အကောငျအထညျဖျောလကျြရှိသညျ။ ၄ငျးတို့မှာ ရခိုငျပွညျနယျရှိ ကြောကျဖွူ၊ တနင်ျဪာရီတိုငျးဒသေကွီးရှိ ထားဎယျနှငျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ သီလဎါ အထူးစီးပှားရေးဇုနျတို့ဖွဈသညျ။ သကျဆိုငျရာ အထူးစီးပှားရေးဇုနျမြားတှငျ စီမံအုပျခြုပျကွီးကွပျသညျ့ လုပျငနျးမြားအတှကျ ဗဟိုအဖှဲ့၊ ဗဟိုလုပျငနျးအဖှဲ့နှငျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှု ကျောမတီတို့ကို အထူးစီးပှားရေးဇုနျဥပဒအေရ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။
အထူးစီးပှားရေးဇုနျဥပဒေ (၂ဝ၁၄) ၏ အခနျး (၁)၊ ပုဒျမ (၃) တှငျ ကငျးလှတျဇုနျကို နိုငျငံပွငျပတှငျ တညျရှိသကဲ့သို့ယူဆရမညျ ဖွဈကွောငျးပွဌာနျး ထားသညျ။ ကငျးလှတျဇုနျသညျ အဓိကအားဖွငျ့ ပွညျပ တငျပို့သညျ့ စြေးကှကျကို အဓိကထားရနျဖွဈပွီး ယငျးဇုနျတှငျ ကုနျထုတျလုပျမှုနယျမွေ၊ သယျယူထောကျပံ့ရေး လုပျငနျးမြား နရောနှငျ့ လကျကား ရောငျးဎယျဖောကျကားသညျ့နရောမြား ပါဎငျသညျ။ SEZ အတှငျးမှ ကုနျစညျမြားနှငျ့ ဇုနျအတှငျး တငျသှငျးသော ကုနျစညျတို့အတှကျ အကောကျခှနျနှငျ့ အခွား အခှနျကငျးလှတျခှငျ့မြား ရရှိနိုငျသညျ။
လုပျငနျးမွှငျ့တငျရေးဇုနျသညျ အဓိကအားဖွငျ့ ပွညျတှငျးစြေးကှကျနှငျ့ အထူးစီးပှားရေးဇုနျမြား အတှငျးရှိ စြေးကှကျပျေါတှငျ အခွခေံထားသညျ။
အဆိုပါဇုနျ၌ ကုနျထုတျလုပျမှု၊ အိမျရာမြား၊ ကုနျတိုကျမြား၊ ဘဏျလုပျငနျးမြား၊ အာမခံလုပျငနျးမြား၊ ကြောငျးမြား၊ ဆေးရုံမြားနှငျ့ အပနျးဖွနေားနရောမြား ကဲ့သို့သော လုပျငနျးမြားတှငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံနိုငျသညျ။
• ပထမ (၇) နှဈအတှကျ ဝငျငှခှေနျကငျးလှတျခှငျ့
• (၇) နှဈကြျောလှနျပွီးနောကျ နောကျထပျ (၅) နှဈအတှကျ တညျဆဲဥပဒအေရ သတျမှတျသညျ့ ဝငျငှခှေနျနှုနျးထား၏ ၅ဝ% သကျသာခှငျ့
• (၁၂)နှဈကြျောလှနျပွီးနောကျ နောကျထပျ(၅)နှဈအတှကျ သီးသနျ့ရနျပုံငှထေား၍ တဈနှဈအတှငျး ယငျးလုပျငနျး တှငျ ပွနျလညျရငျးနှီးမွှုပျနှံလှငျြ ထို မွတျစှနျးငှအေပျေါ တညျဆဲဥပဒအေရ သတျမှတျထားသညျ့ ဝငျငှခှေနျ နှုနျးထား၏ ၅ဝ% သကျသာခှငျ့
• ကုနျသှယျခှနျနှငျ့ တနျဖိုးဖွညျ့အခှနျကငျးလှတျခှငျ့
• ထုတျလုပျရေးအတှကျကုနျကွမျးမြား၊ စကျပစစညျး ကိရိယာမြားနှငျ့ အရနျပစစညျးမြား၊ စကျရုံမြား၊ သိုလှောငျရုံမြားနှငျ့ ကိုယျပိုငျ ရုံးခနျးမြားကဲ့သို့သော အဆောကျအအုံမြား တညျဆောကျရနျ ဆောကျလုပျ ရေးပစစညျးမြားနှငျ့ မျောတျောယာဥျမြားကို ပွညျပမှ တငျသှငျးရာတှငျ အကောကျခှနျနှငျ အခွားအခှနျအခမြား ကငျးလှတျခှငျ့
• အခှနျလှတျလကျကားရောငျးဝယျရေးလုပျငနျး၊ ပွညျပတငျပို့သညျ့ ကုနျသှယျရေးလုပျငနျးနှငျ့ ထောကျပံ့ပို့ဆောငျရေးကဲ့သို့သောဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြားအတှကျ တငျသှငျးသညျ့ ကုနျသှယျမှု ပွုလုပျမညျ့ ရောငျးကုနျမြား၊ ရောငျးခပြွီးမှငှခေမြေညျ့ကုနျစညျမြား၊ ယငျးလုပျငနျးမြားအတှကျ အမှနျတကယျလိုအပျသညျ့ မျောတျောယာဥျမြားနှငျ့ အခွားပစစညျးမြားကို ပွညျပမှ တငျသှငျးရာတှငျ အကောကျခှနျနှငျ့ အခွားအခှနျအခမြားကငျးလှတျခှငျ့
• ကငျးလှတျဇုနျရှိ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူသညျ ပွညျတှငျး သို့မဟုတျ လုပျငနျးမွှငျ့တငျရေးဇုနျမှ ကငျးလှတျဇုနျ သို့တငျသှငျးသညျ့ ကုနျပစစညျးတငျသှငျးခှနျကိုသျော လညျးကောငျးတနျဖိုးဖွညျ့အခှနျကိုသျောလညျးကောငျး ကငျးလှတျခှငျ့ လြှောကျထားနိုငျသညျ။
• ပထမ (၅) နှဈအတှကျ ဝငျငှခှေနျကငျးလှတျခှငျ့
• (၅) နှဈကြျောလှနျပွီးနောကျ နောကျထပျ (၅) နှဈအတှကျ တညျဆဲဥပဒအေရ သတျမှတျသညျ့ ဝငျငှခှေနျနှုနျးထား၏ ၅ဝ% သကျသာခှငျ့
• (၁ဝ) နှဈကြျောလှနျပွီးနောကျ နောကျထပျ (၅)နှဈအတှကျ သီးသနျ့ ရနျပုံငှထေား၍ တဈနှဈ အတှငျး ယငျးလုပျငနျးတှငျ ပွနျလညျ ရငျးနှီး မွှုပျနှံလှငျြ ထို မွတျစှနျးငှအေပျေါ တညျဆဲ ဥပဒေ အရ သတျမှတျထားသညျ့ ဝငျငှခှေနျနှုနျးထား ၏ ၅ဝ% သကျသာခှငျ့
• ပထမ (၅) နှဈ၌ ထုတျလုပျရေးအတှကျ အသုံးပွုသညျ့ စကျပစစညျးကိရိယာမြားနှငျ့ အရနျ ပစစညျးမြား၊ စကျရုံ၊ သိုလှောငျရုံ၊ ကိုယျပိုငျရုံးခနျးတို့ တညျဆောကျရနျအတှကျ ဆောကျလုပျရေး ပစစညျး မြားကို ပွညျပမှ တငျသှငျးရာတှငျ အကောကျခှနျ နှငျ့ အခွားအခှနျအခမြား ကငျးလှတျခှငျ့
• အထကျဖျောပွပါ အရငျးအမွဈတို့အတှကျ နောငျ ၅ နှဈအတှငျး အကောကျခှနျနှငျ့ အခွား အခှနျစညျးကွပျခွငျးမြားမှ ၅ဝ% သကျသာခှငျ့ ရရှိမညျ ဖွဈသညျ။
• ကုနျထုတျရာတှငျ အသုံးပွုမညျ့ ကုနျကွမျး ပစစညျးမြားနှငျ့ အခွားကုနျစညျမြား တငျသှငျးမှူ အတှကျ အကောကျခှနျနှငျ့ အခွားအခှနျအခမြားကို ပေးဆောငျရမညျ
• အထကျပါ တငျသှငျးသော ပစစညျးမြားကို အသုံးပွု၍ ထုတျလုပျထားသော ကုနျခြော ပစစညျး မြားကို ပွညျပသို့ဖွဈစေ၊ ကငျးလှတျဇုနျ အတှငျးသို့ဖွဈစေ တငျပို့ခွငျးဖွဈလှငျြ ယငျးပစစညျး မြား တငျသှငျးသညျ့ အခြိနျက ပေးဆောငျခဲ့ရသညျ့ အကောကျခှနျနှငျ့ အခွားအခှနျအခမြားကို ပွနျလညျထုတျပေးရနျ လြှောကျထားနိုငျသညျ။
• အထူးစီးပှားရေးဇုနျ ဥပဒတှေငျ ကုနျသှယျခှနျနှငျ့ တနျဖိုးဖွညျ့အခှနျတို့အား ၄ငျးအခှနျမြား သကျသာ ခှငျ့ပေးသညျ့ ကာလအတှငျး ကငျးလှတျခှငျ့ ပေးထားသညျ။
• အခွားအခွအေနမြေားတှငျ စီးပှားရေး လုပျငနျး မြားသညျ အကောကျခှနျနှငျ့ ကုနျထုတျ လုပျမှု အတှကျ တငျသှငျးသော ကုနျကွမျးနှငျ့ ကုနျခြော မြားအား စညျးကွပျထား သညျ့ အခှနျမြားကို ပုံမှနျအတိုငျးပေးဆောငျရမညျ။
Tagged DICA, Special Economic Zone
Next postMinimum Wages